Fanorona : tompondakan’i Madagasikara i Zamabe | NewsMada
Fanorona : tompondakan’i Madagasikara i Zamabe
Nafana ny fifanandrinana ! Tsikaritra fa ny samy goavana no tafakatra tamin’ny dingan’ny famaranana teo amin’ny lalao fanorona hitiliana izay ho tompondakan’i Madagasikara, taona 2017.
Rehefa nifanandrina tao anatin’ny ora maromaro, voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara taona 2017 i Jean Marie Dinoh, fantatry ny mpitia fanorona amin’ny anarana hoe Zamabe. Lavony teo amin’ny lalao famaranana notontosaina teny amin’ny Cercle Mess Fiadanana Rakotoarimanana Mahefa. Ady folo mandroso sy folo miverina nahitana ny fohy, kobaka, havia, havanana ary vaky loha no nifanandrinan’izy roa lahy ireto, izay sady nandalo paika sy vela rahateo. Nitana ny laharana fahatelo sy fahaefatra kosa i Li sy i Karana.
Ankoatra ny amboara azon’i Zamabe manamarina fa tompondakan’i Madagasikara taona 2017 eo amin’ny lalao fanorona izy, notolorana vola mitentina 1.000.000 Ar ihany koa izy. 500.000 Ar miaraka amin’ny medaly ny an’i Mahefa, laharana faharoa. 250.000Ar miampy medaly ho an’i Li ary 125.000 Ar ho an’i Karana. Marihina fa nahazo loka avokoa ny mpilalao hatreo amin’ny laharana faha-16.
Na mbola tena vao haingana aza ny nijoroan’ny federasiona malagasin’ny fanorona, anisan’ny dingana sy ezaka lehibe ny vitan’izy ireo ka nahatontosana ity fifaninanana izay ho tompondakan’i Madagasikara ity. Hetahetan’ireo olona maro tonga teny an-toerana kosa ny hisian’ny fifaninanana miainga any amin’ny faritra sy hitohizan’izany hatraty amin’ny fifanintsanana izay ho tompondakan’i Madagasikara, taona 2018.